Task Management Software seSevhisi
Chitatu, June 30, 2010 Chitatu, June 30, 2010 Douglas Karr
Mavhiki mashoma apfuura, ndanga ndichinetseka kuti ndirambe ndichifamba Ndine angangoita gumi nemaviri mapurojekiti, angangoita mashanu makambani evabatsiri, mushandi wenguva yakazara uye zviwanikwa zviviri zvenguva-pfupi. Ndiri kuyedza kuramba ndichitengesa pamwe nekuzadzisa mapurojekiti andakatengesa. Tiri panguva isinganzwisisike iyo isu tine bhizinesi rakaringana kune mumwe mushandi wenguva yakazara… asi hatisati tave nezviwanikwa zvakadaro (anotanga mumasvondo maviri!).
Kuti ndive akarongeka, ndakatenga zvinhu mwedzi yakati wandei yapfuura. Icho chaive chiri nyore kwazvo basa manejimendi chikumbiro cheMac chakabatanidzwa nekarenda yangu. Iyo inoshamisa software uye yakandibatsira chaizvo kuburitsa backlog uye kuramba ndichikoshesa basa rangu.
Dambudziko, zvakadaro, nderekuti rakangonaka kune my shanda. Mazhinji emabasa angu anoshanda pamwe uye anoda nhengo zhinji dzechikwata kuti azadzise akati wandei mabasa mune imwechete chirongwa Ini ndanga ndisingade manejimendi manejimendi software - izvo zvingadai zvakawandisa. Ini ndaingoda nyore application uko kupihwa kupihwa kupihwa mabasa, mabasa ese anoteverwa, uye basa rakapedzwa rinogona kuchengetwa.
Zvakatora chinguva, asi ini ndakawana yakakwana Software seSevhisi mhinduro, HiTask.
HiTask inondibvumidza kuisa mumapoka, kuona mabasa nekutanga, zuva, chirongwa, kana muridzi. Ini ndinogona kumaka rimwe nerimwe basa uye kunyange kusefa iro runyorwa rwebasa ipapo ipapo. Zvakanakisisa pane zvese, iyo bhizinesi account ndeye chete $ 15 pamwedzi uye inokutendera iwe kushandisa yakashambadzirwa subdomain, yako logo, uine 24-awa rutsigiro uye kugona kugovera ako mabasa uye mapurojekiti.
Changu chete chishuwo cheHiTask? Chishandiso cheDroid (vane iPhone app yatovepo). Kwemadhora gumi nemashanu pamwedzi, zvakadaro, iyi ndeimwe heck yehurongwa!
Tags: ad injinimusangano networkconferizedelivraemail nziratsvaga musanganoNzvimbo yanguZvekutaura Zvemagarirozoominfo data services
Chii chinonzi infographic?
Jul 1, 2010 pa 4: 25 AM
Mupangamazano wese wandinovimba naye wandakateedzera vese vakadaidzira chinhu chimwe chete… ”Usashandise mari pamhepo kune chero chinhu chausina chokwadi kuti uchazoshandisa muE-Commerce basa rako ipapo!
Zvekare kuonga kwako misoro-kumusoro pane izvi, Doug. Ndichangobva kusaina! 😛
Jul 15, 2010 na1: 42 PM
Yakanaka webhu dhizaini pane HiTask. Ini munguva pfupi yapfuura ndakaongorora zvakare rangu basa / mapurojuru manejimendi manejimendi uye ndikatama kubva paspredishiti (yemapurojekiti) + YeukaTheMilk (yemabasa) kuenda kuManyMoon (http://www.manymoon.com).
ManyMoon ndeyemahara (mapurojekiti asina muganho) uye inosangana neGoogle Apps kunze kwebhokisi. Ndinovimba ichandichengeta ndiri munzira.
Ipo interface yacho yauya kubva kure, ini ndichiri kusuwa maRK hotkeys angu uye ndoda kuudzwa, asi izvi zvinhu zvandinganyorere Greasemonkey zvinyorwa. 😛
Apr 16, 2012 pa 9: 23 AM
Ndakatanga neHiTask uye navo zvishoma nezvishoma ndakaenda kuComindware task management system iyo yakarongeka zvirinani uye inochengetedza yakatowanda nguva yako sezvo iwe uchikwanisa kushanda muchikwata uye nekuona mashandiro anoita dzimwe nhengo dzechikwata uye kuti vanosangana sei nemisi yakatarwa. Kunze kwekunge iwe unogona kunamatira maHTML ku system uye kushanda neAptlook.